teles relay သည်စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသောဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများကို Google ကပေးသည်
ဂူးဂဲလ်သည် ပို၍ စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောဒီဇိုင်းစိတ်ကူးများကိုပေးသည်
ယခုအချိန်အထိဂူဂဲလ် Pixel ထုတ်ကုန်များသည်လှပသောအမြင့်ကိုအောင်နိုင်သည်ဟုလူသိမများသေးပါ။ သူသည်ယခုနှစ်တွင်အဓိကပရိုဖိုင်းဖြစ်တော့မည်မဟုတ်။
H ကို ir က de နှင့် t
ဂူးဂဲလ် Pixel ထုတ်ကုန်များသည်ဒီဇိုင်းနှင့်ဒီဇိုင်းပိုင်းတွင်အထူးစွဲမှတ်စရာမရှိကြောင်းကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်လက်ခံထားကြသော်လည်း၎င်းတို့သည်ဗေဒ၏ ဦး စားပေးမှုကိုမပေးခဲ့ဟုဆိုနိုင်သည်။ ။ မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူဂူဂဲလ်သည်လည်းဒီဇိုင်းကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ မော်ဒယ်အသစ်များသည်ယေဘုယျအားဖြင့်အခြားရွေးချယ်စရာများစွာပေးပြီး၊ တစ်ခုရွေးသည်။
la တပ်ဦး 's Page Tech မှ အလွန်ယုံကြည်စိတ်ချရသောရင်းမြစ် (sic!) မှမျှော်လင့်ထားသည့်အကြီးဆုံး Pixel5အတွက်အစီအစဉ်များကိုရရှိခဲ့သည်။ မူရင်းအခြေခံအားဖြင့် 3D CAD ဖိုင်များကိုကြည့်ခြင်းဖြင့်သူ၏ဗေဒကိုထပ်မံငြင်းခုံနိုင်သည့်ဒီဇိုင်းအစစ်အမှန်တစ်ခုကိုပြသသင့်သည်။ သို့သော်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့ယခုအချိန်အထိမြင်တွေ့ခဲ့ရသည့်အရာနှင့်တူသည်မဟုတ်ပါ။ ကင်မရာဘောင်သည်အံ့အားသင့်စရာ (သို့မဟုတ်ကြောက်လန့်ခြင်း) နှင့်တူသည်။ ဒါပေမယ့်အခုသူတို့ဟာနောက်ဘက်အာရုံခံကိရိယာသုံးမျိုးကိုအားကိုးနေရတာအလွန်ကတိပေးပါတယ်။ (ဒီဗီဒီယိုကိုလေးမိနစ်လောက်ကြာအောင်ဒီအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကြည့်ရှုသင့်တယ် ဒီမှာတွေ့.)
Meghan နှင့် Harry မှသတိပေးချက် - Duke နှင့် Duchess အမှတ်တံဆိပ် & # 039; အခမဲ့ -loader & # 039; တော်ဝင်ဒေါသအမျက်ထွက်အဖြစ်
Vincent Cassel, Camille Cerf, Bruce Willis ... Valentine's Day ကိုနာမည်ကြီးများကကျင်းပကြသည်